Xasan shiikh oo xaalada Galmudug baaq ka soosaaray – Kismaayo24 News Agency
by admin 2nd February 2020 095
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray baaq ku saabsan xaalada siyaasadeed Galmudug, oo ay xilligan mareyso heerkii ugu sareysay, kaddib markii saddex garab ay u qeybsantay Galmudug, kalana doorteen illaa Labo Madaxweyne, lana filayo garabka 3aad in maalinta berri ay doortaan Madaxweyne.
Xasan Sheekh ayaa ku baaqay in la muujiyo dulqaad iyo isu tanaasul, si loo helo Maamul mideysan, isagoo si gaar ah baaq ugu diray Madaxda dowladda Federaalka, siyaasiyiinta, hoggaamiyeyaasha beelaha.
Halkan hoose ka akhriso Baaqa Xasan Sheekh:-
Deegaannada iyo dadka ku abtirsada Dowlad-goboleedka Galmudug taariikh ahaan waxay dowr mug leh ku lahaayeen dowladnimada Soomaaliya.
Dhismihii GM waxaa loo soo maray wadda dheer oo ay ka mid ahaayeen isku imaatankii iyo wadaxaajoodkii belaha dega Galmudug.
Xilligaas degaannada Galmudug waxaa ka jiray maamullo kala duwan oo tira ahaan aad u badnaa. Kuwo magac ahaan u jiray iyo dhab ahaan u jirayba.
Dadka reer Galmudug wada xaajood dheer ka dib waxaa lagu heshiiyay in laga tanaasulo oo la mideeyo maamulladii jiray xilligaas.
Maanta waxaan rajeynayaa in Galmudug aaney dib ugu noqon meeshii ay ka timid.
Waxaan halkaan baaq uga dirayaa madaxda dowladda federaalka, siyaasiyiinta reer Galmudug iyo hoggaamiyayaasha beelaha in la muujiyo dulqaad iyo tanasul si loo heli Galmudug mideysan oo leh hoggaan la wada doortay, si dhammaan dadka reer Galmudug ugu wada guntadaan iney xoreeyaan degaannada ku harsan gacanta nabaddiidka ugana faa’iidaystaan FURSDAHA faraha badan ee ka jira degaannadooda.
Waxaan dardaarmeynaa oo aan diyaar u nahay inaan gacan ka gaysanno xalka. Waxaan ku talinayaa in la dejiyo xaaladda oo aan la degdegin la iskana ilaaliyo hadallada iyo ficillada aan xalka wax ku soo kordhineyn.
Guul iyo Nabad dhammaan degaannada iyo dadeynaha reer Galmudug.
Fadeexo+Sawirro: Xasan Shiikh oo lagu helay Fadeexo culus oo ka hor istaagi karta in uu Markale soo laabto
Tifaftiraha K24 4th February 2017
XOG: Ergooyin kala duwan oo kala matalaya Degmooyinka Gobolka Gedo oo Kismaayo ku wajahan xilli dhawaan halkaasi uu ka Furmayo shir dib u heshiisiineed.
Dhagayso+Sawiro:- Madaxweyne Gaas oo Garowe Kaga qayb Galaya Xaflada Tiraka koobka shaqalaha Puntland
admin 6th June 2015 27th August 2015